သင့် Facebook အကောင့် လော့မကျဖုို့ ရှောင်ရှာရမယ့် အချက် ( ၈ ) ချက် - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းပညာဗဟုသုတ > သင့် Facebook အကောင့် လော့မကျဖုို့ ရှောင်ရှာရမယ့် အချက် ( ၈ ) ချက်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 7:52 AM နည်းပညာဗဟုသုတ
[ZawGyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် ဖေ့စ်ဘုခ်နေ့တိုင်း အသုံးပြုနေကြတာမို့ ဝက်ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ တားမြစ်ထားတဲ့ အရာတွေ(ဥပမာ – nudity or violence )အပြင် အခြားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချို.ကို ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ တားမြစ်ထားပါသေးတယ် ဘာတွေဖြစ်မလဲ သိထားသင့်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ သင့်သားငယ် အရက်ဘီယာ သောက်နေတာကို လူတကာမြင်စေဖို့ ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ တင်ခဲ့ရင် သင့်အကောင့်ကို facebook က ပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သင့်ရဲ. ဒီအပြုအမူဟာ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မသင့်တော်တဲ့ အပြုအမူကို သင်ပြုမိလို့ပါပဲ။
2. Unintentional Inappropriate Photos
ဖေ့စ်ဘုခ်အနေနဲ့ အခုလိုမျိုး ဘာမှန်းသေသေချာချာ မသိရတဲ့ ပုံရိပ်မျိုးတွေကိုလည်း ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံလို့ ယူဆပြီး ပိတ်ပင်ပစ်လေ့ရှိပါတယ်။
3. Being Mark Zuckerberg
အကယ်၍များ သင့်နာမည်ဟာ Mark Zuckerberg လို့ သင့်မိဘတွေက ပေးထားရင်တောင် ဒီနာမည်ကို ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ အသုံးပြုခွင့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီနာမည်ကို အသုံးပြုခွင့်ရဖို့ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ သင်ဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားတွေ အဆင့်ဆင့်ပေးပို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘာလို့ကန့်သတ်ထားလည်းဆိုတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ၊ Facebook CEO နဲ့ လူတွေကမှားပြီး friend request တွေ ပို့ကြမှာ စိုးလို့ပါတဲ့။
4. Spamming Friend Requests
သင်ဟာ ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ ရေပန်းစားလာပြီး ၊ သင့်ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ် လာ add သူများလာရင် သင့်အကောင့်ကို ဖေ့စ်ဘုခ်က ပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ အောင်မြင်သူတွေဟာ Facebook Pages ကို အသုံးရတာပါ။
Facebook Group တွေဟာ အသုံးချတက်မယ်ဆို အသုံးချတက်သလို အကျိုးရှိပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့်လည်း သင်ဟာ တွေ့သမျှ Group တိုင်းကို request ပို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အကောင့်ဟာ spamming လုပ်တယ်ဆိုပြီး ပြသာနာရှိလာနိုင်ပါတယ်။
6. Being Too Old
Facebook ကို အသုံးပြုဖို့ အနည်းဆုံး အသက် ၁၃ ရှိရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားပါ ၊ ဒါပေမယ့် ဖေ့စ်ဘုခ်ကို အသက်အကြီးဆုံး ဘယ်လောက်ထိ သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကို သင်မသိလောက်ပါဘူး ။ ဟုတ်ကဲ့ အသက် ၉၉ နှစ်ထက်ကြီးသူတွေဟာ ဖေ့စ်ဘုခ်ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သင့်မွေးနေ့သက္ကရာဇ် ရွေးချယ်ရာမှာ ဒီအသက်ထက်ကြီးတဲ့ ခုနှစ်ကို ရွေးချယ်လို့ မရပါဘူး ။ တကယ်လို့များ သင်အသက်လိမ်ထားမှန်း ဖေ့စ်ဘုခ်ကသိသွားရင်လည်း သင့်အကောင့်ကို banned ပစ်မှာပါ။
7. Spamming Status Updates
ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ status တွေ အဆက်မပြတ်တင်နေတာမျိုးဆို သေချာပေါက် သင့်အကောင့် ပြသာနာတက်နိုင်ပါတယ်။
8. Showing Breastfeeding
ဒီကိစ္စဟာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ ၊ ကလေးနို့တိုက်တဲ့ ပုံတွေ တင်ခြင်းဟာ သဘာဝကိစ္စဖြစ်ပြီး ဒါကို တားမြစ်ပိတ်ပင်လို့ ကလေးအမေပေါင်းများစွာ ဒေါသဖြစ်ကြရပါတယ် ။ ကလေးနို့တိုက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေကို facebook moderators တွေက nudity ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပိတ်ပစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။
သငျ့ Facebook အကောငျ့ လော့မကဖြုို့ ရှောငျရှာရမယျ့ အခကျြ ( ၈ ) ခကျြ
[Unicode]ဖွငျ့ဖတျရနျဖစျေ့ဘုချနတေို့ငျး အသုံးပွုနကွေတာမို့ ဝကျဆိုဒျတျောတျောမြားမြားမှာ တားမွဈထားတဲ့ အရာတှေ(ဥပမာ – nudity or violence )အပွငျ အခွားသော စိတျဝငျစားဖှယျ အခြို.ကို ဖစျေ့ဘုချမှာ တားမွဈထားပါသေးတယျ ဘာတှဖွေဈမလဲ သိထားသငျ့ပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ သငျ့သားငယျ အရကျဘီယာ သောကျနတောကို လူတကာမွငျစဖေို့ ဖစျေ့ဘုချမှာ တငျခဲ့ရငျ သငျ့အကောငျ့ကို facebook က ပိတျပဈလိုကျနိုငျပါတယျ ။ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သငျ့ရဲ. ဒီအပွုအမူဟာ ကလေးငယျတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး မသငျ့တျောတဲ့ အပွုအမူကို သငျပွုမိလို့ပါပဲ။
ဖစျေ့ဘုချအနနေဲ့ အခုလိုမြိုး ဘာမှနျးသသေခြောခြာ မသိရတဲ့ ပုံရိပျမြိုးတှကေိုလညျး ညဈညမျးဓါတျပုံလို့ ယူဆပွီး ပိတျပငျပဈလရှေိ့ပါတယျ။
အကယျ၍မြား သငျ့နာမညျဟာ Mark Zuckerberg လို့ သငျ့မိဘတှကေ ပေးထားရငျတောငျ ဒီနာမညျကို ဖစျေ့ဘုချမှာ အသုံးပွုခှငျ့ရမှာ မဟုတျပါဘူး ။ ဒီနာမညျကို အသုံးပွုခှငျ့ရဖို့ဆိုရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ သငျဟာ အမှနျတကယျဖွဈကွောငျး အထောကျအထားတှေ အဆငျ့ဆငျ့ပေးပို့ရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဘာလို့ကနျ့သတျထားလညျးဆိုတော့ ရိုးရှငျးပါတယျ ၊ Facebook CEO နဲ့ လူတှကေမှားပွီး friend request တှေ ပို့ကွမှာ စိုးလို့ပါတဲ့။
သငျဟာ ဖစျေ့ဘုချမှာ ရပေနျးစားလာပွီး ၊ သငျ့ကို သူငယျခငျြးအဖွဈ လာ add သူမြားလာရငျ သငျ့အကောငျ့ကို ဖစျေ့ဘုချက ပိတျပဈလိုကျနိုငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့မို့ အောငျမွငျသူတှဟော Facebook Pages ကို အသုံးရတာပါ။
Facebook Group တှဟော အသုံးခတြကျမယျဆို အသုံးခတြကျသလို အကြိုးရှိပါတယျ ၊ ဒါပမေယျ့လညျး သငျဟာ တှသေ့မြှ Group တိုငျးကို request ပို့နမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့အကောငျ့ဟာ spamming လုပျတယျဆိုပွီး ပွသာနာရှိလာနိုငျပါတယျ။
Facebook ကို အသုံးပွုဖို့ အနညျးဆုံး အသကျ ၁၃ ရှိရမယျဆိုတာ လူတိုငျးသိပွီးသားပါ ၊ ဒါပမေယျ့ ဖစျေ့ဘုချကို အသကျအကွီးဆုံး ဘယျလောကျထိ သုံးနိုငျတယျဆိုတာကို သငျမသိလောကျပါဘူး ။ ဟုတျကဲ့ အသကျ ၉၉ နှဈထကျကွီးသူတှဟော ဖစျေ့ဘုချကို အသုံးပွုနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး ၊ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သငျ့မှေးနသေ့က်ကရာဇျ ရှေးခယျြရာမှာ ဒီအသကျထကျကွီးတဲ့ ခုနှဈကို ရှေးခယျြလို့ မရပါဘူး ။ တကယျလို့မြား သငျအသကျလိမျထားမှနျး ဖစျေ့ဘုချကသိသှားရငျလညျး သငျ့အကောငျ့ကို banned ပဈမှာပါ။
ဖစျေ့ဘုချမှာ status တှေ အဆကျမပွတျတငျနတောမြိုးဆို သခြောပေါကျ သငျ့အကောငျ့ ပွသာနာတကျနိုငျပါတယျ။
ဒီကိစ်စဟာ ရပေနျးစားနတေဲ့ ကိစ်စတဈခုပါပဲ ၊ ကလေးနို့တိုကျတဲ့ ပုံတှေ တငျခွငျးဟာ သဘာဝကိစ်စဖွဈပွီး ဒါကို တားမွဈပိတျပငျလို့ ကလေးအမပေေါငျးမြားစှာ ဒေါသဖွဈကွရပါတယျ ။ ကလေးနို့တိုကျတဲ့ ပုံရိပျတှကေို facebook moderators တှကေ nudity ခေါငျးစဉျနဲ့ ပိတျပဈလေ့ ရှိပါတယျ။ ထူးထူးခွားခွားပါပဲ။
သင့် Facebook အကောင့် လော့မကျဖုို့ ရှောင်ရှာရမယ့် အချက် ( ၈ ) ချက် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:52 AM Rating:5[ZawGyi]ဖြင့်ဖတ်ရန် ဖေ့စ်ဘုခ်နေ့တိုင်း အသုံးပြုနေကြတာမို့ ဝက်ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ တားမြစ်ထားတဲ့ အရာတွေ(ဥပမာ – nudity or violence...